Fantsom-barotra varahina fantsom-bolo vovoka ho an'ny mpangady
Fantsona varahina Cu-DHP acc. amin'ny EN12735 na EN1057
Fotoana: ≈ 5s
Mpanao mpanamboatra enta-mavesatra ho an'ny indostria isan-karazany maniry ny hampitombo ny fiarovana ny taham-pamokarana sy ny famokarana mandritra ny fizotry ny fanodinana induction.
Nahazo santionany amin'ny fanafanana hafanana izahay izay ampahan'ny fivoriambe tena izy (10 metatra mahery). Ny tanjona dia ny hamantatra ny famolavola mety indrindra ho an'ny coil mahazatra izay ahafahan'ny induction brazing ny tonon-taolana roa hotanterahina miaraka.
Ny ekipa HLQ dia nanoro hevitra ny hampiasa ny DWS izay vahaolana famatsian-tsiranoka finday izay azo ampiasaina ho singa entin-tanana na azo ampidirina miaraka amin'ny sandrobika robotic ho an'ny tsipika famokarana automatique.
Tests nanao fitiliana nifanentana amin'ny toerana tena misy ny hafanana amin'ny famokarana hafanana amin'ny famokarana mba hanatsarana ny fomba fiasa marina. Nampiasa coil natao namboarina manokana izahay miaraka amina fampirimana hanampiana ilay mpandraharaha hahatratra valiny haverina, ary koa hampiakatra ny tahan'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fanakorontanana 2 tonony mandritra ny 5 seg. Vokatr'izany, ny fifandraisana mihoa-pampana dia lasa azo antoka sy maloto-porofo.
Raha oharina amin'ny fandefasana lasantsy fandrehitra, induction heating tsy mamokatra lelafo misokatra, noho izany dia azo antoka kokoa ho an'ny mpandraharaha. Ny dingana haingana sy ny famerimberenana azo antoka.
Famahana amin'ny famokarana angovo mahomby
Sokajy Technologies Tags manafatra fanafody manafintohina, fihenam-bidy hafahafa mahery vaika, fanodinana varahina famonoana varahina, fivarotana hafanana mony, fantsom-panala fantsom-panala fantsom-bidy, Rch hafanan-kanina mafana RF Post Fikarohana